तिनीहरूले hoodies प्रेम नाइके
Hoodies नाइके त सुविधाजनक र लोकप्रिय वस्त्र यो प्रमुख खेल दृढ अधिकतम हदसम्म आफ्नो संग्रह तिनीहरूलाई प्रस्तुत गर्न खोज्ने छन्। के लागि आफ्नो प्रयोगकर्ताहरूको त रुचाउनु हो? कपास predominates जसमा ऊतक को पहिलो भाग। उदाहरणका लागि, नाइके र्याली BF ATH हवालात 80% यो वातावरण मैत्री, hygroscopic, नरम र सुखद सामाग्री समावेश पसिना। बसुन्धराको मा राम्रो अवतरण कृत्रिम घटक (20% पलिएस्टर) को साथै द्वारा सुनिश्चित।
दोश्रो, को sweatshirt कारण यसको उत्कृष्ट गर्मी-परिरक्षण गुणहरू लोकप्रियता प्राप्त गरेको छ। यो मोडेल को कपडे कुनै फरक ठीक बनावट भनेर सुरक्षित चिसो र मस्यौदाहरू र प्रशिक्षण, र चल्छ देखि लुकाउन अनुमति दिन्छ। साथै, यी नै गुण विशेष नस्ल द्वारा उन्नत छन्।
तेस्रो, Sweatshirts नाइके ठोस Fz Hoody, धेरै अरूलाई जस्तै, एक विशेष पसली वाला कफ र तल छ। यो अनुमति दिन्छ लुगा कारण लचीलापन को एक निश्चित स्तरमा, खासा फिट चिसो हावा को सेवन सीमित भएको खेलाडी गरेको आन्दोलनहरु संग नहिचकिचाउनुहोस्। यसबाहेक, यो inclement मौसममा थप सुविधा प्रदान गर्दछ जो कपाल ऊन अस्तर देखि नमूनाहरू को एक नम्बर को उपस्थिति ध्यान दिनुहोस् गर्न सम्भव छ। मोडेल Squard ऊन FZ पनि अधिक आरामदायक हुड के लहरै। र नाइके sweatshirt महिला DFC साम्राज्य जो आंशिक पन्जा प्रतिस्थापन गर्न सक्छन् औंठी, को लागि एक प्वाल साथ एक लम्बी स्लिभ देखि। यी लेख कारण एक स्पैन्डेक्स additives (% कुनै थप6भन्दा) थप आसन्न अवतरण गर्दै छन्, एक उच्च गेट र इष्टतम वेंटिलेशन स्लिभ लागि थप प्वालहरू छन्।
चौथो, नाइके sweatshirt द्वारा निर्मित - यो एक उच्च प्रविधी उत्पादन हो। एक विशेष तरिकामा चिस्यान व्यायाम समयमा शरीर टाढा Wicks जो ड्राई फिट, प्रयोग कपडा विशेष प्रकार सिर्जना गर्न। पनि गहन प्रशिक्षण एक खेलाडी शरीर सँधै ड्राई, सर्दी को जोखिम कम र अतिरिक्त सुविधा घटनाहरु खेल दिन्छ जो पछि। धेरै नमूनाहरू pockets, एक जिप वा pockets कङगारु, तपाईं कसरत समयमा आफ्नो मोबाइल फोन वा कुञ्जीहरूको राख्न सक्छ जहाँ छ। कुनै बिजुली (ज्यादातर मानिसहरू) चाँडै टाउको माथि धारण गर्ने संग मोडेल छन्।
पाँचौं, Sweatshirts नाइके आकर्षक उपस्थिति छ। यो द्वारा हासिल छ:
- उज्ज्वल रंग - एउटै मोडेल मा DFC साम्राज्य (गुलाबी);
- कफ (पाली लेजेन्ड) contrasting;
- आकर्षक कढाई (NTF FZ Vintage);
- रोचक ज्यामितीय ढाँचा (पक्षपाती Hoody) र अन्य।
नाइके खेल टोली एक नम्बर को लागि वस्त्र को निर्माता द्वारा अधिकृत छ, त्यसैले तपाईं जस्तै फुटबल क्लब म्यानचेस्टर युनाइटेड रूपमा प्रतीक, संग hoodies खरिद गर्न सक्नुहुन्छ। कम्पनी को स्टोर जो नितम्ब कवर मोडेल (ड्रप फिर्ता क्षेत्र), र लम्बी, जस्तै सबै समय अभिजात वर्ग, जस्तै चाँडै उपलब्ध छन्। पर्याप्त लोकतान्त्रिक Sweatshirts मा मूल्य, यो एक गुणवत्ता वस्तु वर्ष आउन लागि पछिल्लो भनेर हो भनेर दिइएको। कारण यस्तो योजना को लुगा धेरै लोकप्रिय छ र सबै वर्ष राउन्ड लगाउँथे गर्न सकिन्छ भन्ने तथ्यलाई गर्न, मौसमी छूट छन् साना - 10-25 प्रतिशत को दायरामा। आज हामी एक को मूल्य र आधा उदाहरणहरू लगभग चार हजार पाउन सक्नुहुन्छ।
पेन्सिल स्कर्ट को गोडा तल: लगाउने र कसरी संयोजन गर्न के?
उज्ज्वल शरद ऋतु: सुन्तला कोट लगाउन के
गर्मी लागि सबै भन्दा राम्रो sundress
चिसो जाडो लागि न्यानो स्कर्ट
यो हर्मोन prolactin: आदर्श, समारोह, कारण र यसको वृद्धि को नतिजा
स्वतन्त्रता को आत्मा: Lacoste जूता
Doinsta: समीक्षा। सामाजिक सञ्जाल इन्स्टाग्राम सेवा स्वचालित पदोन्नति
ज्याला मा पत्रिका प्रविष्टिहरू कसरी सिर्जना गर्ने
मेरो गले सुन्नु हुन्छ: के यो हुन सक्छ र म यसलाई कसरी उपचार गर्न सक्छु?
को खुट्टा मा हड्डी उभडा: कारणहरू कसरी निको पार्न गर्न
मिन्स्क मा सबै भन्दा राम्रो पूल: अवलोकन, सुविधाहरू, र समीक्षा सिजन टिकट विकल्पहरू